Leli dolobhana Sunny Beach Loveable
Uma ekhulwini XVIII ngu Kurnosovskomu okuthunyelwe endleleni eyehlayo eduze bay, abaningi baya e-Sunshine Village. Yena kwakungekaNkulunkulu le Duchy of Finland, nabo bonke bephuthuma dachas zabo lapha Petersburg Bekulindeleke at amasiko ukukhombisa imithwalo yakho. Kodwa emva kuvulwa emzaneni ujantshi babeba esiwavakashele, nawo ehlobo wena kungatholakala abantu abangaphezu kuka libe yizinkulungwane eziyisihlanu. Futhi kuze kube manje, ukuze ngekhulu xxi, kule ndawo akalilahlile kwayo. Kusukela 1960 ngasekupheleni khona wavula ebhishi negama layo - ngothando. Amanzi lapha umnene ngempela, amagagasi ezolile eshaya ngokumelene ogwini futhi phansi sandy nice kangaka ukuhamba imilenze ukhathele. Ngakho-ke, abaningi Petersburg ezisheshayo edolobhaneni welanga. Beach kukhona kuhle ukuthi indawo kungcono kokuphelele eGulf of Finland ayitholakali.
Abantu abazi ukuthi ukubhukuda kahle, ngokusho endaweni ezinhle kakhulu engxenyeni eseningizimu ebhishi. Lapha, phansi ezijulile nasogwadule olunesihlabathi. Kodwa uma othile engabonakali ukubhukuda kahle, kanti uma kungenjalo kugwenywe ke. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kuyinto isiteshi lokusindisa, futhi ezindaweni eziyingozi kakhulu efakwe ngokucophelela buoys.
Yini Ubamba iso ngokushesha njengoba uthola e Solar? Beach, ehlanzekile futhi zigcinwe kahle. Futhi kufanele kuphawulwe avant-garde ebaziwe, bayahlonishwa spa ukuthi eside ubuka. Pine obumangalisayo. Bephithizela emhlabeni lolwandle ngisho ezitholakele ku insimu yalo. Izihlahla hhayi kuphela ukuhlobisa yonke indawo, kodwa futhi ukunikeza isithunzi enkulu, ikakhulukazi lapho kushisa, kodwa okubaluleke kakhulu - ukusekela pochvu.Vsyudu ahlelwe izindlela ngokhonkolo, ukuze ukwazi ngigijime, ukudambisa ukucindezeleka yena ngebhayisekili. Nomaphi ubona amabhentshi, ngisho umthombo enziwe ukunakekelwa ukuze ugeze isihlabathi ezinyaweni zabo. Lapha inhlanzeko njengebalulekile lolwandle yamathenda ihlanzekile.
On indawo ye-lula izivakashi zonke ayicabangile nemininingwane emincane: idokodo ngokushesha ukushintsha izingubo futhi ugxumele emanzini afudumele, sikhona lapho phezu kwesihlabathi. Futhi ukuqinisekisa ukuthi ubumsulwa alondolozwa leli holidi-abenzi yonke indawo kukhona amabhokisi.
I esiphundu kunazo izoso - nabangani etendeni
Yonke imindeni kanye nezinkampani friendly uze Solar Village. Obathandayo Beach esivumelana ngoba ungakwazi ukuza lapha ngisho izinsuku ezimbalwa. On insimu yalo enikeziwe izindawo ukulala, okungase bahloma amatende. Futhi ungesabi okuzokwenzeka into embi: athwala lezokuphepha osukwini lwayo nobusuku.
Ebusuku e kule ndawo ungakwazi ngempela uphumule zonke imithetho bese ukuphela wena abangani bakho izoso okumnandi. Yiqiniso, umlilo ayikwazi ukuzalela, kodwa kukhona amasayithi eziningi lapho efakwe ukosa inyama, amatafula namabhentshi. Lapha kulapho kungena khona uhlale kusihlwa, ibuka ngaphandle ogwini eGulf of Finland. Ehlobo lapha kukhona idolobha lamatende futhi kunzima kakhulu ukuthola indawo isizini ethengisa.
Kite flying phezu kosebe lolwandle
izivakashi Active uyokwazisa nawe emzaneni Solar (Petersburg). Beach, lapho ungathola endaweni imilingo for a holiday, ilapha. Ukuze abathanda ongaphandle kukhona indawo, ukudlala ibhola (ebukhoneni zemicimbi abafinyelela kwabayishumi for volleyball!). Ehlobo ogwini ukuchitha imincintiswano okuthakazelisayo ezemidlalo.
Ngokuvamile amanzi ungabona Kites ezimibalabala. It kitesurfers babe yamahhashi kumnandi phezu kwamanzi. izivakashi eziningi ezivela ogwini ngentshiseko ubuke emuva them futhi ikhayithi emoyeni.
Gourments-resort izivakashi uyokwaneliswa
Abantu abaningi beya ebhishi akuyona ngokulala ihora elilodwa, ngakho ngokuvamile abantu bakhathazekile inkinga ukudla. Cafe kukhona nakakhulu. Kulabo abafuna yokudla okusheshayo ukudla bese sibuyela emuva emanzini noma sihlanganyele emidlalweni imidlalo, wavula iminyango yabo isidlo. Basuke etholakala eduze lolwandle. Kodwa uma othile efuna ukukupha uzizwe, kungakhathaliseki ukuthi iyini edolobhaneni kwelanga, okuyinto liseduze kakhulu ebhishi, kodwa umhlali ezisemadolobheni Ulapha nezindawo zokudlela. Abayona sibi kakhulu kunalokho okuboniswa ezikoleni ezisemadolobheni. Kuzo kukhona yokugqoka, futhi amanani iphakeme kakhulu kunanoma cafe evamile. Kodwa ukudla ngokuqinisekile ezahlukene - kuba sangempela, futhi zonke gourmet uyokwaneliswa.
Isitimela ngumoya ukuhlangabezana ukuphumula
Petersburg Beach wakhethwa kudala. Ukuze sifinyelele lapha kalula. Isitimela, okuyinto isuka laseFinland Station, kulesi siqondiso ihamba njalo ingxenye yehora. Miss stop cishe kungenakwenzeka, ngoba libizwa - "Solar". Out emsamo, niya phesheya, lapho Isiteshi sesitimela emgwaqweni, futhi kukhona kakade eduze nogu.
indawo Izintandokazi Petersburg
Nakuba elise nomuzi waseJerusalema, kodwa endaweni oyintandokazi kakhulu Petersburg - kungcono impela obathandayo lolwandle. Sunny Izibuyekezo iqoqa engcono kakhulu. Kunobufakazi lokhu futhi: ehambela lesi sigodi ezinsukwini ubudala big isikhulu soMbuso. Ngisho lapho iSoviet Union wafika uyeke Gaulle, wabuye wavakashela lapha.
Ukuvakashela emabhishi libalele, isithombe phezu inkumbulo ufuna ukushiya wena njalo guest. Khona-ke amakhaza asebusika nobusuku obungamashumi amane, ubuka isithombe, sizokwazi ukubona ukuthi ihlobo uyeza maduze futhi sizokwazi ukuze ubuyele kule ndawo.
Museum of Science and Technology Petersburg
Yini ukuletha ekamu intombazane nomfana?
Mascara "Supershok" ( "Avon"): Izibuyekezo ikhasimende
Potato Gratin nge inyama: ukunconywa, okusheshayo, esihlwabusayo
Gleb Zadoya - ehola uchwepheshe we ezimakethe zezimali. imisebenzi yayo futhi umbiko kwamakhasimende
Tape ye ukuphindukuzalwa umphefumulo - "Cloud Atlas". Abalingisi ukutshela umhlaba indaba umthwalo womuntu ngekusasa lawo siqu
Iningi Chainsaw ukukhiqizwa Russian: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa, intengo, ukubuyekezwa
Ngazi kanjani usuku lokuzalwa?
Ekaterina Sidorenko - Ukrainian lwesikhombisa wamabele Usayizi
Ukuthuthukisa sokukhulelwa. imiphumela Ukwelashwa
Ilya Glinnikov: Biography, Filmography, izithombe kanye nempilo yakho
Adnexitis izimbangela kanye nezimpawu, izifo ukwelashwa
Electric ikhaya Ukushisa iholide: isikimu, ukufakwa imishini, ukubuyekezwa